ओली सरकारबिरुद्ध केछ बिद्रोही नेकपाको आगामी योजना ? हेर्नुहोस विप्लवको अन्तर्वार्ता — Sanchar Kendra
हो, कैयौँ जटिलतालाई चिर्दै प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपले त्यस्ता पार्टी, शक्ति, नेता र व्यक्तित्वहरूसँग हाम्रो छलफल भइरहेको छ । धेरैको सोचाइ अग्रगामी, रूपान्तरणकारी पाउँदा हामी साँच्चै नै उत्साहित छौँ । केपी वली सरकार असफल देखिन्छ । केही आन्दोलनका झिल्का पनि देखिने गरेका छन् तर खासै सशक्त आन्दोलन पनि बन्न सकेको छैन । जनतामा असन्तुष्टि र आवेग छ तर आन्दोलनको वातावरण पनि त्यति बलियो छैन । यी सारा पक्षहरूलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?
हो, जनतामा यो चिन्ता छ । यो नेपालको एउटा विशिष्ट घटना हो । यसो भनेर अन्यत्र भएकै थिएन भन्ने होइन । भारतका राज्य सरकारहरूमा यस्तो भएको थियो तर केन्द्रीय सरकारका हकमा नेपालमा जस्तो अन्यत्र पाइँदैन । सरकारमा पनि कम्युनिस्ट (नाम मात्रको भए पनि) र विद्रोहमा पनि कम्युनिस्ट भएर आपसमा नलडे हुन्थ्यो भन्ने जनतामा छ तर त्यो निकै हदसम्म स्पष्ट हुँदै गएको छ । अर्कोतिर अमेरिका, भारतले कम्युनिस्टहरू भनेपछि सबैलाई समाप्त पार्ने दाउ खोज्ने नै भए । उनीहरूले कम्युनिस्ट झन्डा नै मन पराउँदैनन् ।
तर सत्य के हो भने केपी–प्रचण्डहरूले सरकारमा पुगेर जस्ता व्यवहारहरू प्रदर्शन गरिरहेका छन् ती कम्युनिस्टहरूलाई बेइज्जत, बदनाम र समाप्त पार्ने खालका छन् । उनीहरूले दलाल पुँजीवादी सत्तासामु गरिरहेको आत्मसमर्पण, पुँजीवादी संसदीय व्यवस्स्थालाई गरिरहेको महिमागान, सरकारमा बसेर गरिरहेको भ्रष्टाचार, बिताइरहेको कुलीनवर्गीय जीवन, न्यायपूर्ण आन्दोलनमाथि गरिरहेको दमन, हाम्रो पार्टीमाथि लगाएको प्रतिबन्ध आदिजस्ता क्रियाकलापले कम्युनिस्टका विरुद्ध कम्युनिस्ट लडिरहेको सत्य होइन । दलाल पुँजीवादी सत्ता र त्यसलाई रक्षा गर्न अघि सरेको केपी सरकारका विरुद्ध नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले विद्रोह गरिरहेको छ भन्ने विषय हो । हामीले राष्ट्रघात, भ्रष्टाचार, तस्करी, कमिससखोरी, दलालीका विरुद्ध कारबाही गर्दा केपी सरकार र सरकारी नेकपाले समर्थन गर्दथे भने स्थिति अर्कै हुन्थ्यो ।
सही हो, जनअपेक्षाविपरीत भ्रष्टाचार, दलाली, सूदखोरी, ठगी, महँगी त कुनै समयमा नदेखिएका स्तरमा खुलेआम बढेका छन् । यसो हुनुको कारण श्रमिक जनताविरोधी दलाल पुँजीवादी राज्य व्यवस्था हो भने अर्को जनताभन्दा आफैँ असफल केपी वली सरकार हो । राज्य दलालहरूको हातमा पर्नुका कारण जनतालाई सुविधा दिने होइन, कसरी लुट्ने भन्ने खेल मात्र चलिरहेको छ । अर्को केपी सरकारसँग जनतालाई सुविधा दिने कुनै दूरदृष्टि र सुस्पष्ट दृष्टिकोण नभएकाले उनको प्रशासन पदमा पुगेर कसरी फाइदा सोहोर्ने र आफ्नो थैली भर्ने भन्नेमा मात्र केन्द्रित छ । यसले गर्दा यस किसिमका समस्याहरू बढ्दै गएका छन् ।
यसमा पनि हाम्रो सुस्पष्ट दृष्टिकोण छ– नेपाली जनताले गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सहुलियत र समृद्धि पाउनका लागि मुठ्ठीभर दलाल पुँजीवादी वर्गको सत्तालाई मिल्काएर अत्यधिक बहुसङ्ख्यामा रहेका किसान, मजदुर, मध्यमवर्ग, बुद्धिजीवी, देशभक्त, लोकतन्त्रवादी र कम्युनिस्टहरूको राजनीतिक व्यवस्था वैज्ञानिक समाजवाद ल्याउन जरुरी छ । साथै केपी वली सरकारको ठाउँमा उल्लिखित वर्ग, समुदाय, शक्तिहरूको संयुक्त सरकार बनाउन आवश्यक छ । जहाँसम्म सम्भव भएसम्म जनतालाई सुविधा दिनका लागि सङ्घर्ष गर्ने विषय छ हाम्रो पार्टी त्यसका लागि पनि अग्रसर नै छ ।